खतरानाक सेतो पुतली: सम्पर्कमा आउनेवित्तिकै यसरी गुम्छ आँखाको ज्योती || सुनौलो नेपाल
खतरानाक सेतो पुतली: सम्पर्कमा आउनेवित्तिकै यसरी गुम्छ आँखाको ज्योती
पोखरामा सेतो पुतलीको आतंकले दृष्टि नै गुम्ने डर बढेको छ । यसको असरले दैनिक चार–पाँच जना बिरामी परेका छन् । यसको असरले सापु नामको रोग लाग्छ । जसको कारण आँखा सुख्खा हुन गई रोग लागेको केही दिनमै निको नहुनेगरी आँखाको दृष्टि क्षमता पूर्णरुपमा गुम्न जाने हिमालय आँखा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ईन्द्रमान महर्जनले बताए ।
विशेषगरी साँझपख बिजुलीबत्तीको वरपर देखिने यो पुतली निकै घातक हुने चिकित्सक बताउँछन् । यो पुतली शरीरको कुनै भागमा सम्पर्कमा आउनेवित्तिकै उक्त भागमा चिलाउने मात्र नभई यो पुतलीको आगमनको साथै आँखामा एक प्रकारको रोग पनि देखापर्ने गरेको छ । उनका अनुसार यो सेतो पुतली उड्दै गर्दा मानव आँखामा ठोकिएमा वा यसका रौँ कुनै कारणवश आँखामा परेमा रोग लाग्न सक्छ ।
पोखरामा सेतो पुतलीको आतंक फैलिएको छ। रातको समयमा ट्युवलाईट र बिजुली बत्ती पर्दा कपडा झ्यालमा झुम्म भएर बस्ने सेतो पुतलीको झुस आखाँमा पर्‍यो भने आखाँको ज्योतिसम्म गुम्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
रातको समयमा सडकका छेउछाउका बिजुलीका बत्तीमा देखिने सेतो पुतली आखाँमा पर्दा आँखाको ज्योति नै बन्द हुन सक्ने डा. ईलिया श्रेष्ठले बताइन् । केहि दिनदेखि पोखरामा देखिएको सेतो पुतलीको असरले दैनिक जसो ४—५ जना विरामी हिमालय आँखा अस्पतालमा आउने गरेका उनले बताइन् । ४४ वर्ष अघि पोखरामै यस्तो पुतली पहिलो पटक फेला परेको थियो ।
यसका लक्षणहरुमा एक्कासी एउटा आँखा रातो हुनु चिप्रा नलाग्नु उज्यालोमा हेर्न नसक्नु आँखाको दृष्टिमा कमी आउनु दुखाई सामान्य भन्दा बढी हुनु उपचारमा ढिला भएमा कालो नानीमा सेतो देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
रोगको लक्षण देखापरेको २४ देखि ४८ घण्टाभित्र उपचार हुन नपाए आँखाको ज्योति गुम्न सक्ने डा. श्रेष्ठले बताइन् ।
पोखरासहित गण्डकी प्रदेशमा देखिएको सापुको प्रकोपबाट हिमालय आँखा अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये ३४ जना कास्कीका छन् । यो रोगबाट प्रभावित पर्वत स्याङ्जा बाग्लुङबाट दैनिकजसो बिरामी आउने गरेका छन् ।
शनि, भदौ २१, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस